Mmetụta Mgbasa Ọha na Ahịa | Martech Zone
Nyaahụ, m arụnyere a Belkin F9K1106 Dual Band Range Extender N'ụlọ nne na nna m ịnwale ịme ihe mgbaàmà n'ụlọ ọbịa ha. Agụrụ m nyocha niile na ntanetị wee soro ndị di na nwunye m maara. Enweghị m ike ịhụ onye ọ bụla nwere nkwenye doro anya na nyocha dị iche iche; ya mere, m ga-anwale ya maka onwe m. O di nwute, onye ndọtị ahụ ebughi ma bulie mgbaàmà ahụ nke ọma. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ndị mụrụ m nwere ebe ntanetị (nna m arụnyere afọ 20 gara aga mgbe ọ wuru ụlọ ahụ!), Enwere m ike itinye mgbakwunye ahụ na mgbidi ahụ, laghachi na router ha na ọ mere aghụghọ ahụ.
Ihe a niile mere ka m nwee mkparịta ụka na Twitter, Facebook na Google+Na nnọọ ole na ole folks na-enwe olileanya na ihe ngwọta ga-arụ ọrụ otú ha nwere ike ime ka purchasezụ. Mgbasa mgbasa ozi na-elekọta azụmahịa!
Dị ka onye ọ bụla maara na ojiji nke usoro mgbasa ozi ọha na eze na-eto eto na oke ọnụ. Iji zie ezie, n'ime afọ asaa gara aga afọ asaa ojiji nke soshal midia amụbaala pasent 7. Kwa ụbọchị nde na nde mmadụ na-ekwupụta mmetụta ha na ahụmịhe ha banyere ngwaahịa na ọrụ site na mgbasa ozi mmekọrịta. Ya mere, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na azụmahịa ha.
Ihe omuma a, Nbili nke Ahia Ahia nke Australia Ebe a na-ere Fedelta, na-anapụta nnukwu foto.